Somaliland Hadii aanay iyadu gudaheega isqancin aduunyada kalena ma qancin karayno !! | ToggaHerer
← Cabashada Saami Qaybsiga Barlamaanka iyo Guurtida ee Awdal iyo Sool Waa Mid Sed Bursi Ah Laakiin Ay Xaq iyo Gar Ku Leeyihiin
Daawo: ” Maalin dhawayd Waxaa dhaawacmay Waxaa la igu yidhi Mayarkaa amray Markaan waydiiyeyna waxa uu yidhi Shaambadii ayaa la iga xaday” Badhasaabkii hore ee Gobolka Sool →
Published on January 7, 2019 by Magan
SOMALILAND HADII AANAY IYADU GUDAHEEGA IS QANCIN ADUUNYADA KALENA MA QANCIN KARAYNO !!!
Somaliland mudo 28 sano oo bilo ka dhiman yihiin, oo ay jirto waxa ugu weyn ee inoo qabsoomay waxa aan odhan karaa waa nabadgalyo iyo hab maamul iyo kaladambayn oo aynu dhisanay xaga nidaamka dawladnimada walow ay shacabku wax badan qabsadeen oo horumar ah oo u baahan in lagu hambalyeeyo.
Haddaba waxa muhiimadu ugu weyn ay tahay ama ay iila muuqataa waxa aynu dhiganay sidii aynu uga shaqeysiin lahayn iyo waxa inoo qabsoomay sidii aynu u sii adkayn lahayn ee waliba aduunka kale uga iibin lahayn si Somaliland u hesho aqoonsi caalimiya ama wax u dhigma in ay yihiin hawlaha ugu muhiimsan ee inoo yaalla.
Iyada oo Somaliland lagu wada qanacsan yahay guud ahaan ayaa waxa iska jira in qawad hoose iyo saluugyo had iyo goor soo noqnoqda , wax inagu kali ahna maaha oo aduunka ayeynu kala simanahay, laakiin waxa inaga dhimani waa waxii ay dadku kaga bogsan lahaayeen arimahan oo aanay helin.
Marka ayaan yar daraasadeeyay waxyaabaha wax ay aduunka kale kaga baxaan, waxa ka mid ah axsaabta siyaasada oo leh mabaa’dii iyo aaraa kala duwan, meelo lagu soo bandhigo aqoonta iyo rayiga oo dadku aragtidooda iyo doodahooga ka dhiibtaan kuna iibgeeyaan afkaarta gubaysa.
Arimahan dhamaantood maaha qaar ku xidhan uun xukuumada kaliya ee waxa ay u yaalaan qofkasta oo reer Somaliland ah in uu kaalintiisa buuxiyo waxii uu dalkiisa tari karo ee ku biirin karona aqoon iyo awoodba uu u hagar baxo oo fadhiga laga kaco, waayo dalka inagaa ku nool wanaagiisa iyo horumar waxii u soo kordha inta aynu noolahay inagaa ku amaanan , marka aynu geeriyoonana waa la inagu xasuusan doonaa.
Markaa waxa aan is leeyahay waxa ugu muhiimsani ee maanta inoo yaalaa waa in aynu inagu isqancino reer Somaliland ahaan oo doodo iyo aqoon isweydaarsiyo la sameeyo oo aqoonyahanka iyo waxgaradka reer Somaliland oo dhan loo sameeyo meelihii aqoonta lagu shiili lahaa si aynu uga midho dhalino ama iyagu samaystaan.
Doodaha iyo isqancintu hadii ay noqonayaan qaar arimaha bulshada sidii wax looga qaban lahaa ah iyo qaar siyaasadeed iyo qaar waliba tabashooyinka jira lagu daweynayo intaba waa aynu u baahanahay oo dhamaantood waa duruufo jira oo u baahan in reer Somaliland gudahooga isa sii qanciyaan si aynu u iibgayno wax aynu ku wada qanacsan nahay oo qurux badan.
Hawlahani waa qaar ay jaamacaduhu abaabuli karaan oo sameyn karaan doodaha aqoonta iyo horumarka iyo waliba dariiqa siyaasadeed ee qaranka jamhuuriyada Somaliland u marayso aqoonsi caalamiya iyo horumar in wax la iska weydiiyo oo maanka la tuujiyo oo sida aduunku u tixgaliyo aqoonta iyo waxbarashada ay dalkeenana muhiim uga noqoto oo goobaha waxbarashada iyo cilmi baadhistu noqdaan kuwa qaranka iyo bulshada laga hagayo.
Waxa iyaguna sameyn kara machadada aqoonta, nabada iyo cilmi baadhisyada siyaasadaha ee Somaliland iyo aqoonyahan iskood isku abaabulay oo soo bandhigi kara arimahan iyo qaar kale oo u baahan in Somaliland la dardar galiyo arimaheega gudaha iyo kuwa dibadaba si aynu u gaadhno guulo wax ku ool ah.
Haddaba Somaliland waa dal xoriyada hadalka uu habdhaqan nololeed u ahaa, wadatashiga iyo rayiga oo la isweydiiyo ayey ku soo caano maashay oo aynu dalal badan oo aduunka ah dheerayn markeena horeba, haseyeeshee waxa inagu soo badatay saluuga iyo isqancin la’aan iyo tabashooyin badan.
Dhamaantood waxa ay u baahan yihiin in la helo oo la horumariyo waxkasta oo reer Somaliland isku qancin karaan oo ay isaga raali yihiin iyada oo u baahan in loo dhigo nidaam la jaanqaadaya ka ay dadka aduunka inagula nooli maanta isticmaalaan oo aynu dadkeena u bislayno dawladnimada.